Palestina : Hafaliana noho ny namotsorana ireo voafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2008 18:02 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Hafaliana no nitsenan'ny palestiniana ny famotsorana ireo voafonja 199 tany Israely. Tamin'ny Alatsinainy no nambara ny famotsorana azy ireo, ary mety nokendrena hifanindry amin'ny fahatongavan‘i Condoleezza Rice any Israely.
Efa imbetsaka moa no nahemotry ny mpanatanteraka Israeliana ity famotsorana ireo voafonja ity ary nanao fifidianana telo izy ireo mikasika ity raharaha ity. Isan'ireo navotsotra moa i Said al-Attaba, Palestiniana naharitra indrindra tamin'ny fanompoana an'i Israely, izay voafonja nanomboka tamin'ny 1977. Tao koa i Mohammed Ibrahim Abu Ali, voafonja nanomboka tamin'ny 1979.
Nanatrika ny lanonana nadraisana azy ireo i body on the line, ary nanao ny fampitahana tamin'ny fandraisana an'i Samir Kuntar tamin'ny volana Jolay lasa teo. Hoy indrindra izy :
Niandry teo amin'ny hafanana be izahay nandritra ny ora maromaro (Marihina fa 10 minitra raha be indrindra miala avy ao Nablus no misy an'i Huwara). Nampahatsiaro ahy ny fandehanana tamin'ny fandraisana an'i Sami Quntar tamin'ny lohataona teo, na dia nanana seza sy mpihira ho anay aza i Hezbollah (na dia tsy voakapokapoky ny olona manofahofa ny saina aza ny lohanay). Afaka nanatona tsara ny sehatra koa aho, tsy nosarahina ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy ary vitsy lavitra ny olona manatrika (mety tsy antonona an'i Nablus akory ny olona tonga tamin'iny). Nisy namako tonga avy eo, ary henoko mitaraina foana ny olona mikasika ny hafanana. Tena nafana be tokoa aloha, fa rehefa mieritreritra ny fijaliana niaretan'ireo vao nahazo fahafahana aho, ny iray nandritra ny 32 taona, dia heveriko fa ny mitsangana eto mba ho fanomezam-boninahitra azy ireo no mba azontsika atao.
Nahatsiaro ireo voafonja tsy navotsotra koa izy :
Mazava ho azy fa tsy nafahana tao amin'ny toeram-pampijaliana azy ireo gadra politika tena malaza androany : Narwan Barghouti sy Ahmad Sa'adat. Nisy takela-tsary lehibe mikasika an'i Sa'adat tao Nablus (Jereo eo ambany). Ary tsy azo hadinoina koa ireo voafonja hafa mahery ny 10000 any amin'ny fonjan'i Israely. Tsy maitsy tadidiana koa fa ISAN-KALINA ireo mpampihorohoro Israeliana ITF (Israeli Terrorist Forces) dia maka an-kery ary managadra mpanao politika Palestiniana. Tantarain'ilay namako Mustafa izay mipetraka ao amin'ny tananan'i Nablus fahiny ahy isan'andro ny ITF tonga any an-tanana mitondra “bomba” sy basy ary mampihorohoro fianankaviana maro. Amin'ny lafiny iray dia toy ny tananan'ny mpifindra monina ny tananan'i Nablus fahiny. Isan'ireo tanana maro misy manafika amin'ny alina izy. Tamin'ny alina ohatra dia 9 ny Palestiniana nisy naka an-keriny tao amin'ny West Bank.
Nampiany sary nalainy ihany moa ity tantara ity, ary io ambany io ny iray amin'izany :
Misy fanazavana fanampiny avy amin'ny blaogisfera Paalestiniana ao amin'ny Palestine Blogs.